Inqilaabkii Guinea: Madaxwaynihii waa la xidhay, dawladdiina waa la kala diray, xuduudihiina waa la xidhay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Guine News » Inqilaabkii Guinea: Madaxwaynihii waa la xidhay, dawladdiina waa la kala diray, xuduudihiina waa la xidhay
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Guine News • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Waxaa la ogyahay in hoggaamiyaha jabhadda - Mamadi Dumbouya - uu horay uga soo shaqeeyay Laanta Arrimaha Dibadda ee Faransiiska.
Inqilaab militari oo ka dhacay Guinea.
Madaxweynaha Guinea oo ay xireen fallaagada militariga.
Hoggaamiyeyaasha inqilaabka ayaa ku dhawaaqay in si buuxda loo xiray xuduudaha Guinea.
Kornayl Mamadi Dumbouya oo isaga iyo taageerayaashiisu inqilaab ku qabsadeen Guinea kuna qabsadeen awoodda, waxay go'aansadeen inay kala diraan dawladda, baabi'iyaan dastuurka hadda jira iyo inay xidhaan xuduudaha hawada iyo dhulka ee dalka.
Dumbouya ayaa duubay farriin muuqaal ah oo uu ku shaaciyay qorshayaashiisa ka dib markii awoodda lala wareegay Guinea.
Masiirka Madaxweynaha Guinea Alpha Condé ma cadda ka dib markii muuqaal aan la hubin uu ka muuqday isaga oo gacanta ku haya askar, kuwaas oo sheegay in ay awoodda la wareegeen.
Madaxweyne Condé ayaa mar labaad loo doortay markii saddexaad oo uu muran ka taagnaa xafiiska iyada oo ay jireen mudaaharaadyo rabshado watay sannadkii hore.